Venezoela, Japana: Mpitendry Japoney Roa Mahafehy Ny “Harpe” Venezoeliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2012 1:35 GMT
Vakio amin'ny teny Svenska, Español, Ελληνικά, русский, English
Ity lahatsoratra ity, niarahana nanoratra tamin'i Tomomi Sasaki, dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra momba ny mozika amin'ny maha-tetezana azy mampifandray an'i Venezoela sy Japana. Vakio ato ny lahatsoratra voalohany.
Ny “harpe” dia iray amin'ireo zava-maneno manamarika ny mozika Venezoeliana avy amin'ny lemaka. Noforonina tany amin'ny faritra andrefan'ny firenena ary avy eo netina tany Kolombia tany afovoan'ny taonjato faha-20, ny “harpe” Venezoeliana dia manana tady 32 na 33 samihafa ny savaivony ary tsy misy fanitsaka, na”pédales”. Araka i Gelimar Sanchez de Guerrero ao amin'ny Llanorecords [es], tsy mazava ny niavian'ny “harpe” noho ny tsy fahampian'ny rakitra ara-tantara.
Yoko Yoshizawa, iray amin'ireo Japoney mpitendry “harpe” voalohany nandalina manokana ny mozika Venezoeliana, dia lazaina fa “mpiahy ara-mozika” ao amin'ny Estudiantina Komaba. Nizara sy naneho hevitra tamin'ny lahatsary YouTube maro mampiseho ny fahaizan'i Yoshizawa ireo mpikambana ao amin'ny vondrona Facebook ho an'ny Komaba sy ireo mpankafy hafa any Japana.
Mitatitra ny fampisehoan'i Yoshizawa ny blaogy Diary Note, na Raki-diary [jp].
José Francisco Romero [es] dia miantso an'i Mika Agematsu hoe “La japonesa llanera” na “ilay tovovavy Japoney avy eny amin'ny lemaka”, noho izy manan-talenta amin'ny fitendrena ny gadona avy eny amin'iny faritry ny firenena iny. Ato amin'ity lahatsary ity, Agematsu dia mitendry ilay hira “Moliendo Café” (Mitoto kafe) hiram-pitiavana mampalahelo hiran-drazana avy any Venezoela, izay nalaza dia nalaza tany Japana nandritra ny taona 60, araka ny Wikipedia.